Uyenza njani i-Intro yeYouTube? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uyenza njani intro yeYouTube?
Meyi 6, 2021 0 IiCententarios 375
Ngaba ufuna ukuqala ukudala umxholo we-YouTube? Masivuyisane nawe kweso sigqibo, nangona kunjalo kukho izinto ezithile ekufuneka uzithathele ingqalelo ngaphambi kokufaka ividiyo kweli qonga. Enye yezona zinto zibalulekileyo ngumgangatho wesingeniso esihamba nevidiyo yethu. Oku kufanele kube kukutsala ngamehlo, koqobo kunye nomtsalane.
Intro yevidiyo yeYouTube ngaphandle kwamathandabuzo yenye yezona zinto zibalulekileyo kwimveliso. Isingeniso esihle sinokutsala abantu abaninzi ukuba babukele ividiyo yethu. Ukuba awuyazi ukuba ungayenza njani, namhlanje siza kukubonisa amanye amaphepha amahle kakhulu okwenza kunye nokuhlela ii-intro zeYouTube.
Ngaba intro elungileyo ibalulekile?
Kukho abo bajonga ukuba eyona nto ibalulekileyo ngumxholo ophethe ividiyo yethu, nangona kunjalo Isingeniso kufuneka sibe phakathi kwezona zinto zibalulekileyo ekufuneka zithathelwe ingqalelo xa usenza umxholo weqonga leYouTube.
Isingeniso esihle sinokuqinisekisa impumelelo yethu kwi-YouTube. Ukuba iyamangalisa, yoqobo kwaye inomtsalane, kunokwenzeka ukuba ibambe ingqalelo yababukeli, ethi ekugqibeleni iguqulele kwinani elikhulu lokuvelisa kwaye ke ijelo lethu liya kukhula.
Ngenxa yeso sizathu yile ukwenza i-intro ye-YouTube kubaluleke kakhulu. Ukuba awuyazi indlela yokwenza intro enomtsalane ngakumbi ukuvelisa iimbono ezininzi kwisiteshi sakho, ke naka ezi ngcebiso zilandelayo:
Iindlela zokwenza intro elungileyo yeYouTube
Ukwenza isingeniso sokuqala kunye nesinomtsalane Into ephambili iya kuba kukukhetha inkqubo okanye iphepha elikhethekileyo kwesi sihloko. Ngethamsanqa, zininzi esinokufikelela simahla kwaye ngokulula.
Enkosi kolu hlobo lweqonga siya kuba nokukhetha yenza ii-intro ezizizo kunye nezinomdla, kwaye eyona nto ilunge kakhulu, kwimizuzu embalwa. Esinye isitshixo sokwenza intro elungileyo yeYouTube kukwazi ukuba loluphi uhlobo lolwazi esiza kulubeka kuyo.
Kufuneka ibe mfutshane
Ngokufutshane isethulo, kungcono kubabukeli. Amava abonisa ukuba ii-intros ezimfutshane ziphumelele ngakumbi kunezo zihlala ukuya kuthi ga kwimizuzwana engama-30.
Awudingi ixesha elininzi lokufumana ingqalelo yoluntu. Zama ukwenza i Isingeniso semizuzwana eli-10.
Cacisa kangangoko kunokwenzeka
Ukuba kukho into ekufuneka ibe nesingeniso ngokuchanekileyo Ukucaca. Zama ukuba yonke into oyifaka kuyo inxulumene nomxholo okanye injongo yejelo. Isingeniso kufuneka sicace kwaye sihambelane nomxholo esiwukhuthazayo.
Isingeniso kufuneka sibe nomculo, kodwa hayi ngalo naluphi na uhlobo lomculo. Kuya kufuneka uqinisekise ukuba ingoma oyikhethayo ihambelana nesihloko okanye ulwazi oqhele ukwabelana ngalo kwisitishi sakho seYouTube. Umculo kufuneka ungahlawulelwa.
Inoveli kunye neyantlandlolo
Vumela umbono wakho ubhabhe. Isingeniso kufanele ukuba ibe yintsha kunye neyokuqala ngangokunokwenzeka ukufumana ingqalelo yabasebenzisi. Dlala ngemibala, iifonti okanye iimpembelelo ozisebenzisayo.
Ezona nkqubo zibalaseleyo zokwenza isingeniso
Kwiwebhu ungayifumana enkulu Iinkqubo ezahlukeneyo kunye namaphepha apho unokhetho lokwenza ukutsala amehlo kunye neintros zentsusa zesitishi sakho seYouTube. Nalu uluhlu lwezinto ezilungileyo kakhulu:
1 Ngaba intro elungileyo ibalulekile?
2 Iindlela zokwenza intro elungileyo yeYouTube
3 Kufuneka ibe mfutshane
4 Cacisa kangangoko kunokwenzeka
5 Umculo ubalulekile
6 Inoveli kunye neyantlandlolo
7 Ezona nkqubo zibalaseleyo zokwenza isingeniso
Usebenzisa njani iivenkile kwi-Instagram?
Uxela njani okanye unika ingxelo nge-Instagram?